कोरोनापूर्वको अवस्थामा फर्कँदैछ विश्व? – Health Post Nepal
कोरोनापूर्वको अवस्थामा फर्कँदैछ विश्व?
२०७८ चैत ४ गते १२:५०
काठमाडौं–सन् २०२० को मार्च १९ मा क्यालिफोर्निया राज्यमा घरमै बस्नुपर्ने आदेशसहित लकडाउन सुरु गर्दा मानिसहरुले सोचेका थिए–यस्तो अवस्था धेरै कायम रहँदैन, चाँडै नै जीवन सामान्य रुपमा फर्कनेछ।
२४ महिना बितेपछि बल्ल लकडाउनको ‘अँध्यारो सुरुङ’ बाट निस्कने तयारी विश्वले गर्र्दैछ। यतिखेर अमेरिकासहित विश्वका धेरै मुलुकले लकडाउनका प्रतिबन्ध खुकुलो पारेका छन्। यद्यपि केही मुलुकमा अझै पनि दैनिक संक्रमितको संख्याले रेकर्ड बनाइरहेको छ।
बेलायतमा परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएपछि आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने नियम फेब्रुअरीकै अन्त्यबाट हटाइएको छ। त्यसअघि पसल र सार्वजनिक यातायातमा लगाइएको मास्क अनिवार्यको नियम हटाइएको थियो भने सम्भव भएका स्थानमा घरबाटै काम गर्नुपर्ने नियम पनि हटाइएको छ।
सन् २०२१ को अन्त्यतिर ओमिक्रोन भेरियन्ट तीव्र भएपछि मास्क अनिवार्य र घरबाटै काम गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको थियो। खोपले भाइरसबाट उच्च संरक्षण गरेको र ६० वर्षमाथिका ९५ प्रतिशत नागरिकले बुस्टर डोज लगाएपछि कोरोनाका प्रतिबन्धहरु हटाइएको हो।
हाल संक्रमण फेरि बढ्न थालेका संकेत देखिए पनि यसबाट हुने न्यून क्षतिले चिन्ता पनि घटाएको छ।
दक्षिण अफ्रिकामा व्यापार व्यवसायले पूरानै लय समात्न थालेको छ। सरकारले दुई वर्षदेखि लगाउँदै आएको रात्रिकालीन कफ्र्यु पहिलोपटक गत डिसेम्बरबाट हटायो। रातिको समयमा मदिरा बेचबिखनमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि हटाइएको छ।
अहिले दक्षिण अफ्रिकाका प्रमुख सहरको जीवन सामान्य भएर पूरानै लय समात्न थालेको प्रष्ट देखिएको छ। सार्वजनिक स्थानमा मास्क अनिवार्यको नियम पनि हटाइएको छ। अधिकांश विद्यालय खुले पनि नाइट क्लब भने बन्द नै छन्।
हङकङले मुख्यभूमि चीनको ‘जिरो कोभिड’ रणनीति अवलम्बन गर्दा २ वर्षसम्म कोभिडलाई नियन्त्रण गर्न सफल भयो। २०२१ को अन्त्यसम्म त्यहाँ १२ हजार केसमात्र देखिएका थिए। हङकङले चीनमा जस्तै कडा सीमा नियन्त्रण, आक्रामक कन्ट्याक्ट टे«ेसिङ र कडा क्वारेन्टाइन नियम लागू गरेको थियो।
ओमिक्रोन भेरियन्ट तीव्र रुपमा फैलिएपछि अहिले त्यहाँको मृत्युदर विश्वकै उच्चमध्येमा पर्छ। अधिकांश मृत्यु हुनेहरुमा खोप नलगाएका ज्येष्ठ नागरिकहरु रहेका छन्। करिब ५ लाख मानिसहरु संक्रमित भए। सामाजिक दूरीको कडा नियमका बाबजूद पनि त्यहाँ अहिले भाइरस फैलिइरहेको छ। जनवरीदेखि बन्द रहेका जिम, बारहरु अझै खुलेका छैनन् भने रेस्टुँराहरुले साँझ ६ बजेपछि सेवा दिन पाउँदैनन्।
क्यानडामा संघीय सरकारले वायु सेवा र रेलमा मास्क अनिवार्य गरेको छ भने मुलुकमा प्रवेश गर्न पूर्ण खोप लगाएको प्रमाण देखाउपर्ने नियम लागू गरेको छ। यद्यपि केही समयअघिको साताव्यापी प्रदर्शनपछि सरकारले नियमहरु खुकुलो बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यद्यपि अधिकांश कोभिड नियमहरु प्रान्तीय नियमअन्तर्गत पर्छन्। केही प्रान्तले सार्वजनिक स्थानमा सेवा लिन ‘खोप पासपोर्ट’ को नियम लगाएका छन्।
अमेरिकामा टेक्सास र फ्लोरिडामा मास्क अनिवार्य छ भन अधिकांशले यस्ता नियम हटाइसकेका छन्। न्युयोर्क र न्युजर्सीले घरभित्र मास्क अनिवार्यको नियम खुकुलो बनाएका छन्। अमेरिकामा अहिले दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या ३६ हजारमा झरेको छ। यसअघि ओमिक्रोन भेरियन्ट तीव्र भएका बेला दैनिक संक्रमित संख्या ८ लाखसम्म पुगेको थियो।
सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोभिडलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले मार्च ११, २०२० मा विश्व महामारी घोषणा गरेको थियो। हालसम्म यसबाट ६० लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने ४५ करोड ७९ लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन्। अमेरिका, भारत र ब्राजिल कोरोनाबाट विश्वमै सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकको रुपमा रहे।